အရောင်ရင့်မှတ်တမ်း – ဇန်န၀ါရီ ၂၀၁၅ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Editor's Notes » အရောင်ရင့်မှတ်တမ်း – ဇန်န၀ါရီ ၂၀၁၅	50
အရောင်ရင့်မှတ်တမ်း – ဇန်န၀ါရီ ၂၀၁၅
Posted by kai on Jan 9, 2015 in Editor's Notes, Myanmar Gazette, News | 50 comments
That Powerful Tribute to “Charlie Hebdo” Victims Everyone Is Sharing Isn’t by Banksy
ဖားသက်ပြင်း says: ဘရာဗို
pooch says: ဟိုတ​လောကပဲ i’ll ride with you ဆိုပြီး ဖတ်​လိုက်​ရ​တော့ ၂ ဖက်​မျှ​တွေးလိုက်​မိ​သေးတယ်​
ခုဟာက​တော့ ၂၀၁၅ အတွက်​ မသတီစရာ နှစ်​သစ်​အဖွင့်​ ဖြစ်​​နေပြီ
ကမ္ဘာ ကြီးကျန်းမာပါ​စေ လူ​တွေ ​ဘေးကင်းပါ​စေ
မြစပဲရိုး says: http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/france/11335676/Hacktivists-Anonymous-says-it-will-avenge-Charlie-Hebdo-attacks-by-shutting-down-jihadist-websites.html
They add that the group will track down and close all accounts on social networks related to terrorists in order to avenge those who have been killed. This is backed up withastatement entitled “a message to the enemies of freedom of expression” posted to Pastebin, the hacker collective offered their condolences to “the families of the victims of this cowardly and despicable act”.
They write “freedom of expression has suffered inhuman assault … and it is our duty to react”.
“You will not impose your sharia law in our democracies, we will not let your stupidity kill our liberties and our freedom of expression. We have warned you; expect your destruction.”
The press release ends in typical Anonymous fashion:
“We will track you everywhere on the planet, nowhere will you be safe. We are Anonymous. We are legion.
“We do not forget. We do not forgive. Be afraid of us, Islamic State and Al Qaeda – you will get our vengeance.”
Anonymous areagroup comprised of activists and hackers who claim to defend and protect democracy.
In the past the group have carried out cyber attacks on government, religious, and corporate websites by distributed denial-of-service (DDoS) attacks which attempt to overwhelm an online service with traffic from numerous sources so that users can no longer access it. ဒီတစ်ခါတော့
Je suis un Charlie ပါ။
“I am free. I am free to think. I am free to tolerate. I am free to caricature. I am Charlie.”
မတရား အကြမ်းဖက် အာဏာရူး၊ ပါဝါရူး၊ ဘာသာရူး အစွန်းရောက်များ ပပျောက် ပါစေ။
kai says: https://www.youtube.com/watch?v=3WDDWlt7fkk
ပြင်သစ် သရော်စာ မဂ္ဂဇင်း Charlies Herdo ကို အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှုဟာ လူသားတိုင်းရဲ့ အခြေခံ အခွင့်အရေးဖြစ်တဲ့ လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော် ပြောဆိုခွင့်ကို ထိပါးလာခြင်း အပေါ် ဟက်ကာတွေက အစ္စလာမစ် အစွန်းရောက် အကြမ်းဖက် သမားများကို သောကြာနေ့က စစ်ကြေငြာ လိုက်ပါတယ်။
တကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့ ကွန်ပြူတာ ဟက်ကာ၊ ပရိုဂရမ်မာ၊ နည်းပညာကျွမ်းကျင်သူ၊ နယ်ပယ်စုံက လှုပ်ရှား တက်ကြွသူတွေ ပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့ Anonymous group ဟက်ကာအုပ်စုဟာ ယူကျု့ဗီဒီယိုတခု ဇန်န၀ါရီ ၉ ရက်နေ့က တင်ပြီး အင်တာနက်တခွင်မှာရှိတဲ့ အစွန်းရောက် အကြမ်းဖက်မှုနဲ့ ဆက်နွယ်တဲ့ ၀ပ်ဆိုဒ်တွေ၊ ဆိုရှယ်နက်ဝေါ့တွေကို ရှာဖွေထောက်လှမ်း ဖျက်သိမ်း သွားမယ်လို့ ထုတ်ပြန် ကြေငြာ ထားပါတယ်။
ဟက်ကာတွေရဲ့ ဗီဒိယိုမတ်ဆေ့ထဲမှာ al Qaeda ၊ the Islamic State နဲ့ တခြား အကြမ်းဖက် အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ charlie herdo မဂ္ဂဇင်းတိုက် လူအစုလိုက်အပြုံလိုက် သတ်ဖြတ်ခံရမှု၊ လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ပြောဆို ရေသားခွင့်ကို နှောင့်ယှက်ထိပါးတဲ့ လုပ်ရပ်မျိုးဟာ ခွင့်လွှတ်နိုင်စရာ အကြောင်းမရှိသလို အင်တာနက်ပေါ်မှာ အကြမ်းဖက်သမား လှုပ်ရှားမှုတွေ၊ ဆိုရှယ်မီဒီယာ အကောင့်တွေကို ပစ်မှတ်ထား တုံ့ပြန်သွားမယ်လို့ ပြောဆိုထားပါတယ်။
Anonymous group ဟာ အစုိုးရတွေ၊ အဆင့်မြင့်ဌာန ဆိုင်ရာတွေ၊ စီးပွားရေး ကုမ္မဏီ ကော်ပိုရေးရှင်းတွေ၊ အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ အင်တာနက် စာမျက်နှာတွေကို မကြာခဏ တိုက်ခိုက်လေ့ရှိတဲ့ ဟက်ကာအုပ်စု ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတကာမှာ လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ ‪#‎occupy‬ လှုပ်ရှားမှုတွေကို ဖော်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။
အလင်းဆက် says: မကြောက်ပါဘူး။။။
ဒီနေ့အတွက်တော့.. ဖြစ်သမျှအကြောင်း..အကောင်းလို့ပဲ မှတ်ရတော့တာပေါ့…
.တစ်ခုခုပေးမယ်ဆိုရင်တောင်.. လှမ်းယူနိုင်မယ့် အင်အားလေး.. အရင်ပေးပါ… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: Pooch ပြောလိုက်တဲ့ နှစ်ဖက်မျှ တွေး လိုက်မိသေး ဆိုတဲ့ စကားလေး ကို ဖတ်ပြီး တွေးမိတာလေး ကို ရေးချင်လို့ ပြန်ဝင်လာပါတယ်။
အော်ဇီက ကော်ဖီဆိုင် အရေး မှာ အကြမ်းဖက်သမားက အလယ်က။
တစ်ဖက်မှာ ဘာမှ အပြစ်မရှိ ပယောဂ မရှိ တဲ့ လူတွေ ကို ဘာမှ မဆိုင်ဘဲ အသားလွတ် သတ်တာ။
နောက်တစ်ဖက်မှာက ဒီ ရူးနေတဲ့ လူသတ်သမား ရဲ့ အရိပ် ကို ခံရတော့ မဲ့ သူ့ဘာသာ ဆိုင်ရာ က အပြစ်မဲ့ လူတွေ။
ဒီတော့ ဒီ အရူး ကြောင့် နောက်ဆက်တွဲ မလိုအပ်တဲ့ ပြသနာ တွေ မဖြစ် အောင် အပြစ်ကင်းသူချင်း ပူးပေါင်းလိုက်တဲ့ သဘော။
အခု ပဲရစ် က ချာလီ အရေး ကတော့ စ ကြား ကထဲ က အနီးက လူ နဲ့ ဆွေးနွေး အငြင်းပွါးပြီးပြီ။
သူက အသတ်ခံ ရ တဲ့ ကာတွန်းဆရာ တွေ ဘက်က ၁၀၀% ရပ်လိုက်သူ။
အရီး ကတော့ ဒီ ကိစ္စ ကို တွေဝေ ပြီး စဉ်းစားခဲ့တယ်။
အသတ်ခံရသူ တွေ နဲ့ သူတို့ ရဲ့ ပညာ များကို နှမြောမိပါတယ်။
သူတို့ အတွေးအခေါ် တွေ ကို လေးလဲ လေးစားပါတယ်။
သူများ ဘာသာတရား ကို စော်ကား တဲ့ ပြောဆိုမှု ဟာ Freedom of Speech လား မပြောတတ်ဘူး။
အစွန်းရောက် သမား များ ကိုတော့ လုံးဝ မထောက်ခံပါဘူး။
လောကကြီး မှာ မရှိသင့်တဲ့ အကြောင်းပါ။
ကိုယ်မကြိုက်တာပြောတာ နဲ့ လူ တွေ ကို ရက်ရက်စက်စက် သတ်ရလောက်အောင် သူတို့မှာလဲ အခွင့်အရေးမရှိပါဘူး။
အခု ကိစ္စ က စည်းပါးပါး လေးကြားမှာ တစ်ဖက်စီ မမှန်ကြဘူး လို့ ထင်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ မတရားမှု တွေ ကို ဖယ်ရှားပေးမဲ့ Freedom of speech အတွက် တော့ လူတိုင်း ရပ်တည်ပေးရမဲ့ တာဝန် ရှိပါတယ်။
ကိုယ်တိုင်က အဲဒီလို အကြမ်းဖက်သမား အရူး တစ်ယောက် မဟုတ်ခဲ့ရင်ပေါ့။
နောက် ဟက်ကာ တွေ အကြောင်းကလဲ ထရော်မာ ရှိနေခဲ့ပြီမို့ ထောက်ခံ သင့်မသင့် စဉ်းစားဆဲ။
အကြမ်းဖက် website တွေ ဆိုတာ ဘာနဲ့ တိုင်း မှာလဲ။
ဒီ ရွာက အကြမ်းဖက် အားပေးတဲ့ Site မှ လုံးဝ မဟုတ်ခဲ့တာ။
လွတ်လပ်စွာ တွေးခေါ် ပြောဆိုခွင့် အတွက် နေရာတစ်ခု ဘဲ လေ။
ကိုထင်လင်းဦး အမှု အကြောင်းကိုလဲ။
လူအသိုင်းအဝိုင်း အားလုံး လိုက်နာဖို့ ပြဌာန်း သတ်မှတ်ထား တဲ့ ဥပဒေ ကို လူတိုင်း ဘာသာ၊ လူမျိုး မရွေး လေးစား လိုက်နာရမှာပါ။
အဲဒီ အများ အတွက် ဥပဒေ ကို သီးသန့် ဥပဒေ တစ်ခု က လာပြီး လွှမ်းမိုးချင်လို့ မရပါဘူး။
kai says: satire အရေးအခံရဆုံးက.. နိုင်ငံရေး.. လိင်ကိစ္စနဲံ.. ဘာသာရေးတဲ့..။
ဘာသာရေးမှာလည်း.. လွတ်လပ်စွာကိုယ့်အမြင်ဖေါ်ထုတ်ခွင့်.. စော်ကားချင်စော်ကားခွင့်ရှိရမှာပါပဲ..။
ဒီလိုမှသာ..မွန်းမံ ကောင်းမွန်ပြီး..လူတွေနဲ့.. လူ့ပါတ်ဝန်းကျင်နဲ့ အညမညဖြစ်..ကိုက်ညီတဲ့ဘာသာတရားထွက်လာမယ်မဟုတ်လား..။
ဗုဒ္ဓအပါအ၀င်.. ဂျီးဆက်စ်.. မိုဟာမက်တို့က.. အဲဒီလမ်းလျှောက်ပြီးမှ.. ဘာသာတရားတခုကို.. ဖွင့်လှစ်ပြနိုင်ခဲ့ကြတာပဲ..။
ဗုဒ္ဓက.. ရှိနှင့်ပြီးဟိန္ဒူ…။ ဂျီးဆက်စ်က.. ရှိနှင့်ပြီး.. ဂျူး..။ မိုဟာမက်က.. ရှိနှင့်ပြီး.. ခရစ်ယန်နဲ့ဂျူးကနေ.. ဖွင့်လှစ်ပြတဲ့ဘာသာတရားတွေပေါ့..။
ပြဿနာဖြစ်ပြီဆိုရင်.. သူတို့.. ဘယ်လိုတုံ့ပြန်ကြသလည်း.. အင်မတန်စိတ်ဝင်စားစရာပါ..။
ဗုဒ္ဓက.. ပြဿနာအတိုအရှည်အလိုက်.. တုံ့ပြန်တယ်..။
ဂျီးဆက်စ်က… သည်းခံခြင်းအားဖြင့်.. အသက်ပါစတေးပြီးတုံ့ပြန်တယ်…။
မိုဟာမက်ကတော့.. စစ်တပ်ထောင်ပြီး.. တုံ့ပြန်တယ်…။
ခရစ်ယန်က.. လက်ရှိမှာ.. အအောင်မြင်ဆုံးဘာသာတရား..
ဆက်ဆွေးနွေးချင်…။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: I do not agree with what you say,
but I’ll defend to the death your right to say it.
မြစပဲရိုး says: မနက်က အချိန်မရလိုက်လို့ ဒီ စာသား ကို မဆွေးနွေး ရသေးဘူး။
I do not agree with what you say,
မြန်မာပြည်မှာရော စာနယ်ဇင်း သမား တွေ အများစု ဟာ တကယ်ဘဲ စာနယ်ဇင်း စိတ်ဓာတ် အပြည့်ရှိရဲ့လား မသိ။
မရှိ သေးဘူး လို့ ဘဲ ဝမ်းနည်းစွာ စွပ်စွဲ ပါတယ်။
တကယ်ဘဲ လွတ်လပ်စွာ ရေးသား ဖော်ပြခွင့်၊ ပြောဆိုခွင့် တွေ ကို ကိုယ်တိုင် လေးစားရင်
အခု ကိုထင်လင်းဦး ရဲ့ အမှု မှာ သူပြောတာ ကို သဘောမတူဘူးထားဦး။
သူ့မှာ လွတ်လပ်စွာ ဝေဖန်ခွင့် ရှိတယ် ဆိုတာ အတွက် ဝိုင်းပြီး ကာကွယ်ပေးပြီဖို့ ကောင်းတယ်။
သင်္ကန်းခြုံ ပြီး ဒေါသမထိန်းနိုင်တဲ့၊ ခွင့်လွှတ်မှု မရှိတဲ့ မေတ္တာစိတ်ကင်း တဲ့ သူများ ဟာ ဘုရား ရဲ့ ကျင့်စဉ် ကို မလိုက်နာသူများ ဖြစ်ကြောင်း ဘာလို့ မပြောရဲ ရမှာလဲ။
အဲဒါကို မှားတယ် ထင်ရင် သူ့ကို ပြန်ပြီး ဝေဖန် တုန့်ပြန် ပေါ့။
နောက်ပြီး အကယ်ဒမီပွဲ က ဦးတင်ဝင်းလှိုင် ပြောတာ ရော သူ့ပုံ တွေ ကိုပါ ဆင်ဆာလုပ် ခဲ့တဲ့ အကြောင်း ကို သိလိုက်ရကထဲ က
မြန်မာပြည် ရဲ့ စာနယ်ဇင်း တွေ အများစုဟာ ကိုယ်ပိုင် ရပ်တည်ချက် မရှိတဲ့ Freedom of speech ကို နားမလည်တဲ့ အသုံးမကျ တဲ့ စာနယ်ဇင်း များ လို့ ဘဲ မြင်ပါတယ်။
တနည်း ပိုက်ဆံ အတွက် ဘဲ ကြည့်နေသော လူများစု သာ ဖြစ်နေလို့ နိုင်ငံတိုးတက်ရေးမှာ စာနယ်ဇင်း ကို အားကိုးနိုင်ဖို့ လမ်း မရှိသေး လို့ သာမြင်ပါတယ်။
တကယ်လို့ များ မြန်မာပြည်ရဲ့ စာနယ်ဇင်း တစ်ခုခု က ပြင်သစ် အကြမ်းဖက် မှု အတွက် ဝမ်းနည်းကြောင်း၊ သူတို့ နဲ့ အတူ ရှိနေပါကြောင်း I am Charlie လို့ ပြောခဲ့ရင်
ကိုယ့်နိုင်ငံ ထဲ မှာ ဆုံးရှုံး နေတဲ့ Freedom of speech အတွက် လဲ ဘယ်မျက်နှာ ကိုမှ မထောက်၊ ဘာအရောင် ကို မှ မကြောက်ဘဲ အရင် တိုက်ပွဲဝင်ပေးကြပါဦးလို့။
kai says: Post by ချစ်ခွန်း ချိုချို.
“နစ္စ ဂီတ ၀ါဒိတ ဝိသူက ဒဿန မာလာဂန္ဓ ၀ိလေပန ဓာရဏ မဏ္ဍန ဝိဘူသနဋ္ဌာနာ ဝေရမဏိ သိက္ခာပဒံ သမာဒိယာမိ။
(နစ္စ = ကခြင်း
ဂီတ = သီဆိုခြင်း
၀ါဒိတ = တီးမှုတ်ခြင်း
၀ိသူကဒဿန = ဆန့်ကျင့်ဘက်ကို ကြည့်ရူခြင်း
မာလာဓာရဏ = ပန်းပန်ခြင်း
ဂန္ဓဓရဏ = အမွှေး ရနံဆောင်ခြင်း
ဂန္ဓ၀ိလေပန = နံ့သာ နံ့သာပျောင်းသုံးစွဲခြင်း
မဏ္ဍန = အလှပြင်ခြင်း
၀ိဘူသန = တန်ဆာဆင်ခြင်း
ဋ္ဌာန = အကြောင်းအရာ တို့ကို ရှောင်ရခြင်း)”
မြစပဲရိုး says: သူကြီး အဲဒီ ဗီဒီယို က Facebook ပေါ်မှာ မရှိတော့ဘူး ထင်တယ်။
တကယ် ဘဲ အမှန် ရိုက်ထားတာ ဆိုရင်တော့
ကျွန်မတော့ ကိုယ့်ဟာ ကို ဘာသာမရှိသူ အေးသီးရစ် လို့ ဘဲ ပြောတော့မယ်။
But I am justastrong and good follower of Buddha.
ဂျာမန် မှာလဲ အဲဒီ သရော်ကာတွန်း ကို ပြန်ပြီး ထုတ်ဝေလိုက် တဲ့ သတင်းစာတိုက် ကို ဒီနေ့မနက် ခဲတွေ ပေါက်ခွဲပြီး အထဲ ကို မီးရှို့ သွားပြန်တယ်။
kai says: “အခုဆိုလို့ရှိရင် ဆင်းရဲမွဲတေမှုပပျောက်ခြင်း ဆိုပြီးတော့ ပြောကြတယ်ပေါ့လေ။ ဆင်းရဲမွဲတေမှု ကျဆင်းအောင်လုပ်မယ်။ ပပျောက်အောင်လုပ်မယ်။ အဲဒါဟာ ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲ။ တချို့ကတော့ ဒါအစိုးရက လုပ်ပေးရမယ့်ကိစ္စလို့ ဒီလိုပဲထင်ကြပါတယ်။ အစိုးရက လုပ်ရမယ့်ကိစ္စတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ အစိုးရက လုပ်ထားတာတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ တာဝန်ယူ ထမ်းဆောင်ရမှာတွေ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အရေးကြီးတာက ပြည်သူလူထုကသာလျှင် မိမိတို့ရဲ့ စွမ်းဆောင်မှုနဲ့ ကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့ ဆင်းရဲမွဲတေမှုကို ပပျောက်အောင် လုပ်နိုင်မယ်ဆိုတာကို ကျွန်မတို့အားလုံး သဘောပေါက်ဖို့ လိုပါတယ်။ ပြီးတော့ ဆင်းရဲမွဲတေမှု ဘယ်လိုပပျောက်အောင် လုပ်မလဲဆိုတာ စဉ်းစားတဲ့နေရာမှာ ကျွန်မတို့ဟာ ဥာဏ်ပညာ လိုပါတယ်။ ပညာရှိမှကျွန်မတို့ နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေ ပညာအဆင့်မြင့်မှ ဒီနိုင်ငံဟာ အဆင့်မြင့်နိုင်မှာပါ။ ပြီးတော့ ပညာမရှိဘဲနဲ့ ကျွန်မတို့ ဆင်းရဲမွဲတေမှု ပျောက်အောင် လုပ်နိုင်မယ်ဆိုတာ အဓိပ္ပာယ်မရှိပါဘူး။ ပြည်သူတွေကို စဉ်းစားပိုင်ခွင့်မပေးဘူး။ ပြည်သူတွေကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် တွေးတောပိုင်ခွင့်မပေးဘဲနဲ့ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ အဆင့်မြင့်အောင် လုပ်မယ်ဆိုတာဟာ ဒါအဓိပ္ပာယ်မရှိတဲ့ အတွေးအခေါ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်သူတွေ အတွေးအခေါ် အဆင့်မြင့်မှ ကျွန်မတို့နိုင်ငံဟာ အဆင့်မြင့်နိုင်မှာပါ”
“လွတ်လပ်တဲ့ လူ့အသိုင်းအဝိုင်းတွေမှာ လွတ်လပ်တဲ့ အတွေးအခေါ်တွေရှိတယ်ဆို တာအမှန်ပါပဲ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ လွတ်လပ်တဲ့ လူ့အသိုင်းအဝိုင်းမှာ ဆိုလို့ရှိရင် လွတ်လွတ်လပ်လပ် လေ့လာဆည်းပူးပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ လွတ်လွတ်လပ်လပ် တွေးခေါ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပြောဆိုပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပြောဆိုပိုင်ခွင့် ရှိတယ်လို့ ပြောတဲ့နေရာမှာ ကျွန်မက သတိပေးချင်တဲ့ အချက်ကလေးတော့ ထပ်ပြီး ပြောပါရစေ။ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပြောဆိုပိုင်ခွင့် ရှိတယ်ဆိုတာ လွတ်လွတ်လပ်လပ် မုသားပြောဆိုပိုင်ခွင့်ကို ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ လွတ်လွတ်လပ်လပ် သူတစ်ပါးကို တိုက်ခိုက်ပိုင်ခွင့်ကို ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်ရဲ့ ယုံကြည်ချက်ကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပြောပိုင်ခွင့်ရှိတာကို ပြောတာပါ” – See more at: http://news-eleven.com
မြစပဲရိုး says: From Mark Zuckerberg Facebook Wall :
January9at 7:13am ·
Mark Zuckerberg က သူ့ ရဲ့ Facebook ပေါ်မှာ တစ်ခုခု အပေါ် offensive ဖြစ်လဲ
လောကကြီး ကို ကောင်းဖို့ဆိုရင်
အဲဒီ အတွေးအခေါ် တွေ အမြင်တွေ ရှုဒေါင့် တွေကို လက်ခံပါတယ် တဲ့။
လူ တွေ ရဲ့ ပါးစပ် ကို ပိတ်ထား အောင် ခြိမ်းခြောက် ထားလို့ ကြောက်ပြီး မပြောဘဲ ငြိမ်နေတာ ကို
Facebook မှာ မဖြစ် စေရဘူးတဲ့။
အကြမ်းဖက် ခြိမ်းခြောက်မှု တွေ မပါဘဲ လွတ်လပ်စွာ ပြောနိုင်ပါသတဲ့။
အပေါ်မှာ သူကြီးမင်း မိန့်ကြားခဲ့လိုက်သလိုပါဘဲ။
တော်လိုက်တဲ့ တို့ သူကြီးမင်း။ lol:-))))) But men ….. Where is the border line between those two sides ?
No worry I haveasloution now. Here it is.
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရဲ့ Quote …..
လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပြောဆိုပိုင်ခွင့် ရှိတယ်လို့ ပြောတဲ့နေရာမှာ ကျွန်မက သတိပေးချင်တဲ့ အချက်ကလေးတော့ ထပ်ပြီး ပြောပါရစေ။
လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပြောဆိုပိုင်ခွင့် ရှိတယ်ဆိုတာ လွတ်လွတ်လပ်လပ် မုသားပြောဆိုပိုင်ခွင့်ကို ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။
လွတ်လွတ်လပ်လပ် သူတစ်ပါးကို တိုက်ခိုက်ပိုင်ခွင့်ကို ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။
ကိုယ့်ရဲ့ ယုံကြည်ချက်ကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပြောပိုင်ခွင့်ရှိတာကို ပြောတာပါ”
That’s wise. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14410
kai says: သီတဂူဆရာတော်ကြီးနှင့် ဦးမြတ်ခိုင် အင်တာဗျူး
လျှပ်တစ်ပြက်သတင်းဂျာနယ် အတွဲ(၅)၊ အမှတ်(၁၅) ၁၅ ၊
၅ . ၁ .၂၀၁၅ (တနင်္လာ)
( ၂၀၁၅ ဇန်နဝါရီလထုတ် လျှပ်တစ်ပြက်သတင်းဂျာနယ် ဒေါင်းလုပ်လင့်ခ်လဲပေးထားတယ်။ )
MK ။ ။ အရှင်ဘုရာ့း့့  ပြည်တွင်းမှာ ဖြစ်နေတဲ့ ဘာသာရေးပဋိပက္ခတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ အရှင်ဘုရား ဘာများမိန့်ချင်ပါသလဲဘုရား။
ဆရာတော်။ ။ တို့ပြည်တွင်းက accident လောက်ပဲ ငါကထင်တာပါ။ တကယ့်ပဋိပက္ခလို့ ငါက မယူဆဘူး။ accident ဆိုတာ မတော်တဆ ကားတိုက်တာမျိုး။ အဲဒီလိုဟာမျိုးလောက်ပဲ မြန်မာပြည်မှာဖြစ်နေတယ်လို့
ငါ့အနေနဲ့ထင်တယ်။ တကယ့်ပဋိပက္ခလို့ မထင်ဘူး။ မော်တော်ကားတိုက် သလောက်ဖြစ်သွားတဲ့ ဒီအဖြစ်အပျက်ကလေးတွေက မော်တော်ကားတိုက်လို့ ယာဉ်ထိန်းရဲကရှင်းရင် ဒါရှင်းသွားတာပဲ။ ဒါမျိုးပါပဲ။ ပုလိပ်မင်းကြီးဆင်းလာ သလိုပေါ့။ ငါတော့ အဲဒီလောက်ပဲထင်တယ်။ သိပ်အကြီးအကျယ်မဟုတ်ဘူးလေ။ ငါတော့ ဒီလိုပဲထင်တယ်။ ဟိုနားဒီနားကနေပြီးတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာဘက်ကလည်း ဘာသာရေးကောင်းစွာလိုက်စားလေ့ကျင့်ခြင်းမရှိတော့၊ အစ္စလာမ်ဘက် ကလည်း အစ္စလာမ်ရဲ့အဆုံးအမကို နားမထောင်တော့ လူငယ်တချို့တဝက် တစ်ယောက်တလေကနေပြီးတော့ ရမ်းကားတာတို့၊ စော်ကားတာတို့၊ မူးတာတို့၊ တိုက်တာတို့၊ ရန်ဖြစ်တာတို့့့  အဲဒီဥစ္စာကို အခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့ အော်ချင်တဲ့ကောင်က အသံအကျယ်ကြီးအော်လိုက်တာ။ ငါ အဲဒီလိုပဲယူဆတယ်။ တကယ့်ကြီးကျယ်တဲ့ပဋိပက္ခတော့ ဘာသာတရားအချင်းချင်း မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတယ်လို့ ငါက မထင်ဘူး။ ဘာသာတရားတိုင်းမှာ ဘယ်အဆုံးအမကိုမှ မလိုက်နာတဲ့လူဆိုးလူမိုက်တွေရှိတာပဲ။ အဲဒီလူဆိုး၊ လူမိုက်၊ လူညံ့ကလေးတွေက နည်းနည်းပါးပါး သူတို့ဖြစ်ကြတဲ့ပဋိပက္ခကို အဲဒါကို တစ်စုံတစ်ယောက်သောသူကနေ အခွင့်အရေးတစ်ရပ်အနေနဲ့ ချဲ့ထွင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်လို့ ငါ ဒီနေ့တော့ အဲဒီလိုတွေးတယ်။
MK ။ ။ (၂၀၁၅) မှာ ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်ရင် တိုင်းပြည်အတွက် ပိုကောင်းမှာလဲ ဘုရား
ဆရာတော်။ ။ ဒီကနေ့လက်ရှိအနေအထားအရက လက်ရှိ သမ္မတကြီး ဆက်ရှိစေချင်တယ်။ မင်းက ဘာသာရေးမေးရင်းကနေ နိုင်ငံရေးရောက်နေပြီ။
MK ။ ။ ဒါက သာသနာရေးနဲ့လည်း ဆိုင်တယ်ဘုရား။ နိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်မှ သာသနာပွင့်လင်းမှာ။
ဆရာတော်။ ။ individual stability နော်။ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ချင်းအရ stability ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် ငါရှာကြည့်တယ်။ ရှားတယ်။ အများစုရဲ့ကျေနပ်မှုကိုရအောင် လုပ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်း တော်တော်တော့ ရှားလိမ့်မယ်။
ဘာကြောင့် လက်ရှိသမ္မတကြီးက ငါက ဆက်လုပ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုတာပြောရမယ်ဆိုရင် တို့က (၁၉၄၈) ခုနှစ်ကစပြီး အခုထက်ထိ မင်းဆက်ပေါင်း (၁၂) ဆက်လောက် တို့ကရှိသွားပြီ။ မင်းဆက်တွေ ငါ တော်တော်များများကြုံခဲ့တယ်။ မင်း အသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ။
MK ။ ။ တပည့်တေ့ာ် (၅၉) ပါဘုရား။
ဆရာတော်။ ။ မင်းက (၅၉)။ မင်း ငါ့လောက်မကြုံဖူး။ ဖဆပလ။ ဖဆပလပြီးတော့ အိမ်စောင့်အစိုးရ။ အိမ်စောင့်အစိုးရပြီးတော့ ပထစ။ ပထစပြီးတော့ တော်လှန်ရေးအစိုးရ။ တော်လှန်ရေးအစိုးရပြီးတော့ နဝတ။
နဝတပြီးတော့ နယက။ အခုထက်ထိ မင်းဆက်ကို နည်းတာမဟုတ်ဘူး။ ငါ ပြန်ကြည့်တယ်။ ပထမမင်းဆက်လုပ်သွားတဲ့ policy တစ်ခုကို အဲဒီပထမ မင်းဆက်ပြုတ်သွားရင် နောက်မင်းဆက်တစ်ဆက်က ဆက်မလုပ်ဘူး။ အဲဒါမျိုး တွေ တို့တိုင်းပြည်မှာများတယ်။ အများတကာ့အများဆုံးကတော့ တပ်မတော်ခေတ်မှာများတယ်။ (၁၉၆၂) ကစပြီး ဒီဘက်ပိုင်းပေါ့။ ငါက စစ်ကိုင်းတိုင်း တောက်လျှောက်နေတာဆိုတော့ စစ်ကိုင်းတိုင်းမှာ တိုင်းမှူးတစ်ယောက်ပြောင်း သွားရင် သုံးနှစ်လောက်နေပြီး နောက်တစ်ယောက်ပြောင်းသွားရော။ နောက် တိုင်းမှူးတစ်ယောက်ရောက်လာတယ်။ စစ်အစိုးရခေတ်။ ပထမတိုင်းမှူးလုပ်သွားတဲ့ policy သည် နောက်တိုင်းမှူးက ဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူး။ အဲဒါသိပ်ဝမ်းနည်းဖို့ကောင်းတယ်။ ဘက်စုံ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးခြံကြီးတို့ ဘာတို့ စစ်ကိုင်းမှာ အခုချုံတောကြီးတွေဖြစ်နေပြီ။ မဆလအစိုးရလုပ်တာကို နဝတတက်လာတော့
ဖျက်ပစ်လိုက်တယ်။ အဲဒါမျိုးတွေ အများကြီးပဲ။ စစ်အစိုးရလက်ထက်က တိုင်းမှူးတွေက အာဏာပိုင်လေ။ ရှေ့တိုင်းမှူးလုပ်သွားတာကို နောက်တိုင်းမှူးက ဖျက်ပစ်။ ပဲခူးနားမှာ ကန်တစ်ရာ၊ ခြံတစ်ရာ မင်းကြားဖူးတယ်မဟုတ်လား။ ငါး ဘယ်နှကောင်စားရလို့လဲ။ ဘဲ ဘယ်နှကောင်စားရလို့လဲ။ အဲဒါမျိုး ရှိနေတယ်။ ဖဆပလခေတ်ကလည်း ဒီအတိုင်းပဲ။ ကျော်ငြိမ်းလုပ်သွားတဲ့ policy ကို ဦးနုတို့တက်လာတော့ ဦးနုတို့သခင်တင်တို့အဖွဲ့ ဘာမှမလုပ်ဘူး။
အဲဒါကြောင့် အခုဦးသိန်းစိန်သမ္မတ အစိုးရအဖွဲ့လုပ်နေတဲ့ မူဝါဒတွေ၊ policy တွေက အခုမှမျိုးစေ့လေးချပြီး စိုက်မလို့၊ ပျိုးမလို့ မြေကြီးထွန်တုန်း၊ ယက်တုန်းရှိသေးတယ်။ ငါးနှစ်စေ့ပြီးတော့ နောက်အစိုးရပြောင်းပြီဆိုရင်
ဒီနေရာမှာမထွန်ဘူးဟေ့၊ တို့ဟိုအနားသွားထွန်မယ်ဆိုရင် ဒီ policy ကြီး ပျက်ပြန်ရော။ ငါက အဲဒါမြင်နေရတယ်။ ဆယ်နှစ်လောက်တော့ လုပ်ခွင့်ပေးပါ။ ဒါမှ သူ့အစွမ်းသတ္တိကို တို့ကသိရမယ်။ ဆယ်နှစ်လောက်လုပ်လို့မှ မဖြစ်ရင် တော့ သွားပေါ့ကွ။ နောက်တစ်ယောက်လဲပေါ့။ နှစ်နှစ်တစ်ခါ၊ သုံးနှစ်တစ်ခါလဲ နေရင် မင်း ဘာမှမဖြစ်ဘူး။ လုပ်မလို့ စည်းဝေးတုန်းရှိသေးတယ့့့်  ပြုတ်သွားပြန်ပြီ။ တိုင်ပင်တုန်း Plan ချတုန်းရှိသေးတယ့့့်  ပြုတ်သွားပြီ။ အငြိမ့်လူပြက်တွေပြောသလို ဟေ့ကောင့့့်  မင်း ဝိပဿနာရှုဖူးလားဆိုတော့ ရှုဖူးပါတယ်တဲ့။ ဘာလဲဆိုတော့ ဖြစ်ပျက်တဲ့။ ဟာ့့့  မင်းဥစ္စာ ဖြစ်ပျက်ဆိုတာ ဖျက်ပစ်လို့ပြောတာကွတဲ့ (ရယ်လျက်)။ ရှေ့ကလုပ်သွားတာ နောက်ကဖျက်၊ ရှေ့ကလုပ်သွားတာ နောက်ကဖျက်။ ကြာပြီ။ နှစ် (၆၀) လောက်ရှိနေပြီ။ အဲဒီတော့ အစိုးရတစ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကို ဆယ်နှစ်လောက်လုပ်စေချင်တယ်။ လုပ်လို့မှမဖြစ်ရင်တော့ ဖြုတ်ပစ်။
MK ။ ။ အရှင်ဘုရားပြန်လာတော့ ဆောင်းပါးလေးရေးပါဘုရား။
ဆရာတော်။ ။ ရေးပါ့မယ်။ ဆောင်းပါးရေးမယ်။ မိန့်ခွန်းကို ဘာသာပြန်ပေးမယ်နော်။ ဒီကနေ့ မင်းမွေးခွန်းက ဘာသာရေးမေးခွန်းနဲ့ နိုင်ငံရေးမေးခွန်းနှစ်ခု။
MK ။ ။တပည့်ေ့တော်လည်းး လျှောက်ချင်နေတာကြာပြီ ဘုရား။
ဆရာတော်။ ။ အကယ်၍သာ ဦးသိန်းစိန်မဟုတ်ဘူး။ တခြားလူ တစ်ယောက်ယောက်က အခုနေ၊ အခုခေတ်၊ အခုအချိန်မှာ အစိုးရဖြစ်နေရင် လည်း ငါဒီလိုပဲပြောမှာပဲ။ ဦးသိန်းစိန်မို့လို့ မဟုတ်ဘူး။ တခြားခေါင်းဆောင်
တစ်ယောက်က အစိုးရတက်လုပ်နေရင်လည်း အဲဒီလူကို ဆယ်နှစ်တော့လုပ်ပါ။ ငါ ဒီလိုပဲပြောမှာပဲ။ ငါးနှစ်ဆိုတာ ဘာမှလုပ်ခွင့်မရှိဘူး။ ဥပဒေပြုတာတောင် မပြီးဘူး။ ဘာပြီးလဲ။ အခြေခံဥပဒေဆိုတာ ဘာမှမပြီးဘူး။ တခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာဥပဒေ့့့  ရေးပြီးရုံလေးပဲရှိသေးတယ်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေက မလာသေးဘူး။ ပြောတုန်းဆိုတုန်းရှိသေးတယ်။ လဲတော့မယ်။
အဲဒါတွေ မကောင်းလို့ အနောက်အစိုးရတက်လာရင် ဖျက်ပစ်ဆိုရင် ဝိပဿနာပြော သလိုပဲ ဖြစ်ပျက်၊ ဖျက်ပစ်ဆိုရင် တို့တိုင်းပြည်က အပျက်ချည်းပဲ တလျှောက် လုံးသွားနေရမယ်။ ကားတွေအဟောင်းချည်း စီးနေရသလိုပဲ တစ်ဖွဲ့က ချမှတ်သွားတဲ့ Policy ကို နောက်တစ်ဖွဲ့က ဖျက်ပစ်နေတာနဲ့ပဲ တိုင်းပြည်က့့့  ။ တစ်ဖွဲ့၊ တစ်ဖွဲ့ကို ဆယ်နှစ်တော့ လုပ်ခွင့်ပေးစေချင်တယ်။
အမေရိကန်မှာ သမ္မတတစ်သက်က “ဆယ်နှစ်”့့  ။ နောက်တစ်ကြိမ်ရွေးလည်း အရွေးခံတယ်၊ နိုင်လည်းနိုင်တယ်။ အခုနောက်တစ်ကြိမ်ဆိုရင် အိုဘားမားရချင်မှရမယ်။ ငါ သတိထားကြည့်တယ်။ သက်တမ်းနှစ်ဆက်၊ နှစ်ဆက် တိုင်းပြည်က ဆက်ပြီး တင်ကြတယ့့့် အမေရိကန်မှာ။ တို့တိုင်းပြည်မှာလည်း အစိုးရတစ်ဖွဲ့ကို နှစ်ဆက်လောက်တော့ တင်စေချင်တယ်။
MK ။ ။ ဒီအစိုးရသက်တမ်းမှာ သာသနာပိုပွင့်လင်း လာတယ်လ်လို့ အရှင်ဘုရား ယူဆသလားဘုရား။
ဆရာတော်။ ။ သာသနာပွင့်လင်းလာတယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းထက် နိုင်ငံရေးပိုင်းက ပိုပွင့်လင်းလာတယ်လို့ပဲ ယူဆပါတယ်။ သာသနာပွင့်လင်းလာတာနဲ့အမျှ နိုင်ငံတော်ပွင့်လင်းလာဖို့က ပိုအရေးကြီးတယ်။ နိုင်ငံနဲ့သာသနာက
interrelated။ နိုင်ငံတော်ရဲ့ပွင့်လင်းခြင်းနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်းက ဘာသာသနာ အားလုံးရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်းရဲ့အခြေခံပဲ။ interrelated တွေဖြစ်နေတာ။
MK ။ ။ အခု (၂၀၁၅) မှာကော သံဃာတော်တွေက မဲပေးဖို့ လိုအပ်လား။
ဆရာတော်။ ။ (၂၀၁၅) ရယ် မဟုတ်ပါဘူး။ သံဃာတော် အရှင်မြတ်တွေက မြန်မာနိုင်ငံရဲ့သာသနာ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံသဘော တရားအရ နိုင်ငံရေးတွေနဲ့ involve မဖြစ်တာ အကောင်းဆုံးပဲ။ မဲမပေးတာ
အကောင်းဆုံးပဲ။ ထိုင်းနိုင်ငံမှာလည်း အဲဒီစနစ်ရှိတယ်။ လာအို၊ ကမ္ဗောဒီးယား မှာလည်းရှိတယ်။ သီရိလင်္ကာကျတော့ တစ်မျိုးကြီး။ ဘုန်းကြီးကိုယ်တိုင်က အမတ်လောင်းအဖြစ်နဲ့ ဝင်အရွေးခံခွင့်ရှိတယ်။ ဘုန်းကြီးတွေ ဝန်ကြီးလည်း လုပ်ကြတယ်။ ။
ဆက်လက်၍ သီတဂူဆရာတော်ဘုရားမှ အစိုးရတပ်ဖွဲ့ကို ငါးနှစ်မက ဆယ်နှစ်လုပ်ခွင့်ပေးစေလိုကြောင်း တိုက်တွန်းမိန့်ကြားခဲ့သည်။ လူပုဂ္ဂိုလ်အနေ နဲ့ မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုမျှ ပြောကြားခြင်းမဟုတ်ဟုလည်း ဆိုသည်။
စာကူးစာရိုက် – Min Soe Naing
CharTooLan says: – ဆိုဒေါ့ အာ့ကို ဘိုမြင်ကျဒုံး
kai says: ယူအက်စ်အခြေခံဥပဒေအရ.. ယူအက်စ်သမ္မတက.. သက်တမ်း၂ခု.. ၈နှစ်ထက်ပို၍ အရွေးခံမရ..။
Historians point to George Washington’s decision not to seekathird term as evidence that the founders sawatwo-term limit asabulwark againstamonarchy, although his Farewell Address suggests that he was not seeking re-election because of his age. Thomas Jefferson also contributed to the convention ofatwo-term limit when he wrote in 1807,
ဦးကြောင်ကြီး says: သီတဂူ ဆရာတော် ပြောတဲ့ ရှေ့တိုင်းမှူးလုပ်သွားတာ နောက်တိုင်းမှူးဆက်မလုပ်လို့ ဆုံးရှုံးပါတယ်ဆိုတာ ဘာကြောင့် အဲလိုစီမံရသလဲ သမိုင်းဂျောင်းနဲ့ လွဲနေတယ်။ တိုင်းမှူးဓေ၈ါင် သုံးနှစ်ဆိုတာ ဂျိုကုတ်မှူးဂျီးသမ်းရွှေလက်ထက်မှာ ပြောင်းလိုက်တာ။ အယင်တိုင်းမှူးတွေ ဖင်ဂျွတ်တက်အောင် ထိုင်နေပြီး စားကြဝါးကြ စားမာန်ခုတ်ကြမို့ ထိန်းသိမ်းလို့ရအောင် ၃နှစ်ပေးစားပြီး ပြောင်းပစ်တာ..။ သီတဂူ ဆရာတော်က ဇစ်မြစ်မသိဘဲ ရမ်းကြိတ်နေတာ။ အဲလို မဖြစ်အောင် ဘယ်လိုညှိကွပ်မည်လဲ သူလည်း သိပုံမရ။ ပြောတာတော့ လူတိုင်းပြောတတ်တာပေါ့။ သူ့အင်တာဗျူးခန်း ဖတ်လိုက်ရင် လက်ရှိအခြေအနေလေးကို လက်မလွှတ်ချင်ဘူး။ နေရာရ ရှေးရိုးအစဉ်အလာတွေနဲ့ နေရာလက်မဲ့ ပြင်ဆင်ရေးဝါဒီ ထိပ်တိုက်တွေ့ရမည့် အစဉ်အလာ ပုံစံခွက်ပါပဲ။ နိုင်ငံတကာနဲ့ ဒီလောက်ထိတွေ့သူ ဘုန်းကြီးတောင် ဘပြောင်ကြီးလောက် သာသနာစောင့်ရှောက်မည့်သူ မရှိထင်နေသေးရင် ကျန်နေရာရ ဘုန်းကြီးများ သာဆိုးမည်။ သူတို့ဖက်ကတွေးပြန်တော့ ဟုတ်တာပဲ.. အသက်ကြီးပြီလေ.. ပိုနေမြဲ ကျားနေမြဲသာလျင် သူတို့ လိုက်မှီမည် ထိန်းနိုင်မည်.. အပြောင်းအလဲ ဖြစ်သွားရင် မသေချာတော့။ အုပ်ချုပ်စီမံ ကဏ္ဍမှာ change management ဘာသာရပ် သီးခြားရှိတာပဲ။ ပိုတိုးတက်လာနိင်ခြင်းနဲ့အတူ စွန့်စားရမှာ မလိုချင်တော့… အရွယ်အားဖြင့်လည်း မဆိုင်တော့ပြီ.. မသေချာတဲ့ အလုပ်မလုပ်လိုတော့..နောက်ပီးဒေါ့ ရုပ်ဝတ္တုတိုးတက်လေ သာသနာ ဆုတ်ယုတ်လေ (သာသနာထက် သူတို့ရပ်တည်မှု ထိပါးတ ပိုကြောက်မှာပေါ့။ နို့မိုလျင် တီဗွီလှူ ၊ကားလှူ ၊ အိုင်ဖုံးအလှူ ခံပါ့မလား) ပြောကြေးဆို ဘွားဒေါ်ဂျီးလည်း ဒီသဘောပဲ။ တိုက်ခိုက်နေရတာထက် အလံဖြူ ထောင် နိုင်ငံရေးလုပ်တဲ့ လမ်းစဉ်ရွေးလိုက်တယ်။ အသက်အရွယ် သိပ်စကားပြောတယ်။ သီတဂူ ဆရာတော် ခြေလှမ်းကို ဒီမိုတို့ မျက်ခြေမပြတ်ကြနဲ့..။ လိုအပ်လျင် ရန်ငါစည်းပြတ်ကြ..။ နို့မို့လျင် ၂၀၁၅ ရွေးဂေါက်ပွဲမှာ ဒီမိုသမားအတွက် အနှောက်အယှက် ဖြစ်လိမ့်မည်။
kai says: FOR IMMEDIATE RELEASE
DE BLASIO ADMINISTRATION ANNOUNCES ACTIVATION OF IDNYC PLAN TO HANDLE HIGH DEMAND
Enrollment to move to an appointment-based system
NEW YORK—Director of Operations Mindy Tarlow, Immigrant Affairs Commissioner Nisha Agarwal, and Human Resources Administration Commissioner Steve Banks announced today the activation ofaplanned response to handle high demand for the IDNYC municipal identification program. On Wednesday, January 14, the City will switch to an appointment-based system to increase ease of access for applicants.
“In building the program, we gave ourselves the option to switch to an appointment-based system, should demand be higher than anticipated,” said Director of Operations Mindy Tarlow. “It is our commitment that every New Yorker be served inatimely manner.”
“We are delighted to see such an incredible response to the launch of the IDNYC program,” said Immigrant Affairs Commissioner Nisha Agarwal. “The demand says to us that New Yorkers all across the five boroughs are eager to get their card. Now, with the appointment system, we will ensure that it is even easier than before to sign up for IDNYC.”
“The strong demand for IDNYC shows just how important this is to thousands of New Yorkers,” said HRA Commissioner Steven Banks. “We are committed to providing excellent customer service, no matter how many New Yorkers apply for the card. We are assigning extra volunteer staff with tablets to help make the process easier. We do ask for patience, given the huge volume of applications.”
Starting Wednesday after9AM, New Yorkers will be able to make an appointment at the closest enrollment center by going online to http://www.nyc.gov/IDNYC or calling 311. IDNYC staff at enrollment sites will help walk-ins to schedule appointments. There is no deadline to apply for the card, and the City will protect the confidentiality of all IDNYC card applications.
In addition, pop up enrollment sites will start rolling out soon to expand capacity; two of them are scheduled to open at the end of the month and three more shortly thereafter.
kai says: Tragedy abruptly puts an end to UNLV senior’s life
By Adelaide Chen (contact)
Published Tuesday, Jan. 13, 2015 |2a.m.
Updated Wednesday, Jan. 14, 2015 | 12:12 p.m
About 400 people gathered Sunday ataLas Vegas funeral home to mourna25-year-old real estate agent, UNLV biology student and Burmese political asylee who died last month after he was punched outsideaparty.
William Yar Parke andafriend were leavingasuite at the Venetian Dec. 28 around 2:30 a.m. when Parke was confronted byafew men from the party, according to Joe Paweleka,afamily friend briefed by Metro Police about what was on surveillance tape of the incident.
“One of the guys approached him and knocked him out cold,” Pawelek said. “And then they took off.”
Parke fell backwards from the force of the punch, landing headfirst onahard floor, Pawelek said.
Parke was transported to Sunrise Hospital and Medical Center, where he slipped intoacoma. He was taken off life support Dec. 29, according to Grace Aye, Parke’s mother.
The Clark County Coroner’s Office ruled the deathahomicide resulting fromablunt force injury to the head.
Originally, the case was being handled by Metro Police’s violent crimes unit, but has been transferred to homicide detectives, said Officer Laura Meltzer.
Police already have an arrest warrant out for Alex Vongsouphanh, 20, who is suspected to have punched Parke, said Meltzer on Jan. 13.
Parke’s death has generated interest in the local Burmese community. His family fled from Burma to Guam in 2005, where they lived before arriving in Las Vegas in 2009 seeking political asylum, according to Aye.
Parke obtained U.S. citizenship in 2013 and changed his legal name to William Yar Parke, consisting ofaWestern first name and the last name of his aunt, Tint Tint Parke, who raised him while his mother worked abroad. The name that appears on his diploma from Spring Valley High School is Yar Pyih.
During high school, Parke worked at Sonny Sushi, first asasushi chef and then asamarketing manager, said owner Sann Ni. Ni was also Parke’s first buyer when Parke obtained his real estate license.
Whileafull-time student at UNLV, Parke enrolled in an online course offered by Key Realty School in Las Vegas. The whole process took two-and-a-half weeks, said Teddy Federwitz,areal estate broker who saw his potential and hired him to sell homes as an agent for Key Realty. Parke sold about $1.75 million of residential real estate in his first year, said Federwitz.
“God, I love this,” Parke told him two weeks into the job. He had found his calling, said Federwitz. But he also listened to Federwitz’ advice: Don’t drop out of college.
More Detail : http://www.lasvegassun.com/news/2015/jan/13/william-yar-parke/
pooch says: စိတ်​မ​ကောင်းစရာပဲ
၂၅ နှစ်​ဆိုတာ အရမ်းငယ်​လွန်းတယ်​
လွတ်​​နေတဲ့သူကလည်း ၂၀ ပဲရှိ​သေးတယ်​
မိရင်​လည်း အရွယ်​​ကောင်းမှာ ဘ၀နာအုန်းမယ်​
kai says: မောင်ရာပြည့်ကို.. ဒီဇင်ဘာ ၂၅ရက်နေ့တင် လပ်စ်ဗေးဂတ်ရောက်တုံး… စကားတွေပြောလိုက်ရသေးတယ်..။
ဆန်းတာက.. လန်ခ်ျ့ တူတူစားကြတာမို့.. ဓာတ်ပုံတွေဒီလောက်အများကြီးရိုက်တဲ့အထဲ.. ကျုပ်ကင်မရာထဲသူ့ပုံ.. တပုံမှမပါ..။
Ma Ma says: ဘယ်ကောင်မလေးတွေ လိုက်ရိုက်နေလဲမှ မသိတာ။
ဦးကျောက်ခဲ says: သဂျီးရေ… အရောင်ရင့်မှတ်တမ်းမှာ သမိုင်းကျန်ရစ်အောင်…
“မြန်မာ့ဂဇက်အဖွဲ့သားများနှင့် အများကောင်းမှု” ၁၁/၁/၂၀၁၅… အဲဒါလေး
kai says: ပုံနှိပ်သတင်းစာထဲပါမယ်ဗျို့..။
kai says: Authorities in Saudi Arabia have publicly beheadedawoman in Islam’s holy city of Mecca, prompting further criticism of the country’s human rights record.
kai says: Charlie Hebdo now printing7million copies – Jan. 17, 2015
CNNMoney | money.cnn.com
The new total reflects extraordinary demand for what has become known as the magazine’s “survivors issue.” It was produced in the days immediately followingaterrorist attack at the magazine’s office in Paris. The attackers were apparently motivated by the magazine’s criticisms of Islam and depictions of the Prophet Mohammed.
kai says: Myanmar Gazette February 2015 No74 by Myanmar Gazette
မြစပဲရိုး says: သူကြီး မင်း ရဲ့ သတင်းစာ အပြင်အဆင် ဒီဇိုင်း တွေ ဒီ တစ်ပါတ် ပိုပြီးအဆင့်မြင့် လာတယ် ထင်ရဲ့။
Well Done ပါ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14410
kai says: မကျဆုံးမီ ခြောက်ရက်အလို ၁၉၄၇ ခုနှစ် ဇူလိုင် ၁၃ ရက်တွင် မြို့တော်ခန်းမ၌ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ပြောကြားခဲ့သည့် နောက်ဆုံးမိန့်ခွန်းမှ
လွတ်လပ်ရေးဆိုလို့ ခင်ဗျားတို့ကို ကျွန်တော်ပြောပြဦးမယ်။ လွတ်လပ်ရေးဆိုတိုင်း ပဒေသာပင်မြေက မပေါက်နိုင်ဘူး ဆိုတာကို ခင်ဗျားတို့ကို ကျွန်တော် ရှင်းခဲ့ချင်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် ခင်ဗျားတို့စိတ်ထဲမှာ လွတ်လပ်ရေးရတော့မယ် ဆိုလို့ရှိရင် စိတ်ကူးက ဘယ်လိုစိတ်ကူးကြသလဲ ဆိုလို့ရှိရင် ပဒေသာပင်ကြီး ချက်ချင်း၊ နေ့ချင်းညချင်း ပေါက်လာကြတော့မလို ခင်ဗျားတို့ ထင်ကြတဲ့သူတွေ များကြတယ်။ တချို့ကလည်းပဲ ဟာ လွတ်လပ်ရေးရပြီ ဆိုပြီးတော့ ဘာလုပ်ချင်သလဲဆိုတော့ ကျွန်တော် အရင်တစ်ခါတုန်းက တွေ့ခဲ့တယ်။ ဂျပန်ခေတ်တုန်းက ဂျပန်ခေတ် ဗမာ့လွတ်လပ်ရေး၊ ဘုရားစူးစေ့ ဗမာ့လွတ်လပ်ရေးတုန်းက၊ အဲဒီတုန်းက ဆိုလို့ရှိရင် ဟင်္သာတနယ်ထဲမှာ ကျွန်တော်တွေ့ခဲ့တယ်။ ဘာတွေ့သလဲဆိုရင် လမ်းမပေါ်မှာ ဆေးလှန်းတယ်။ ဟာ၊ လွတ်လပ်ရေးရပြီကွ ဆိုပြီးတော့ လူတကာသွားတဲ့ လမ်းမပေါ်မှာ ထွက်ပြီး ဆေးတွေလှန်းတယ်။ အဲဒီတော့ လမ်းသွားလမ်းလာ လုပ်တဲ့သူတွေ အတော် ခွကျတယ်။ အဲဒါဟာ လွတ်လပ်ရေး မဟုတ်ဘူး။
လွတ်လပ်ရေးဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်က ဘာလဲ။ လွတ်လပ်ရေးဆိုတာဟာ ကိုယ်တစ်ဦးတစ်ယောက် ကောင်းစားဖို့ဖြစ်စေ၊ တစ်မျိုးလုံး ကောင်းစားဖို့ဖြစ်စေ၊ လုပ်တဲ့နေရာမှာ အခြားတစ်ဦး တစ်ယောက်ရဲ့ အကျိုးကို မထိခိုက်ဘဲနဲ့ အခြားလူတွေရဲ့ အကျိုးကို မထိခိုက်ဘဲနဲ့ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ကိုယ့်တိုးတက်မှုအတွက် လုပ်နိုင်တာဟာ လွတ်လပ်ရေးပဲ။ ဥပမာ-ခင်ဗျား စီးပွားရေးဖြစ်ထွန်းအောင် လုပ်တဲ့နေရာမှာ အနှောင့်အယှက် မရှိစေရဘူး။ အခြားလူတွေရဲ့ အကျိုးကို မထိခိုက်လို့ရှိရင် အနှောင့်အယှက် မရှိစေရဘူး။ တိုင်းပြည်တစ်ပြည်ရဲ့ အကျိုးကို မထိခိုက်စေရဘူး။ အခြားလူတွေရဲ့ အကျိုးကို မထိခိုက်စေရဘူး။ ခင်ဗျားလွတ်လွတ်လပ်လပ် လုပ်နိုင်တဲ့ အခြေအနေ ရှိရမယ်။ သို့သော်လည်း အခြားနိုင်ငံရဲ့ လွတ်လပ်ရေးကို သွားနှောင့်ယှက်တဲ့ လွတ်လပ်ရေးဟာ လွတ်လပ်ရေးကို မဟုတ်ဘူး။ အဲဒါ ဘာလဲဆိုရင် လိုင်စင်ခေါ်တယ်။ ဒါဟာ ရမ်းကားမှုမျှသာ ဖြစ်တယ်။
ဒီတော့ လွတ်လပ်ရေးဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ဟာ စည်းမဲ့ကမ်းမဲ့သဘောမျိုး မဟုတ်ဘူး။ စည်းနဲ့ကမ်းနဲ့ သဘောမျိုးသာ ဖြစ်တယ်။ စည်းနဲ့ကမ်းနဲ့ ရှိမှသာလျှင် လွတ်လပ်ရေးဆိုတာ ဖြစ်နိုင်တယ်။ အဲဒီတော့ လွတ်လပ်ရေးဆိုတာကို ကျွန်တော်တို့ ရတဲ့အခါမှာလည်း နားလည်ရမှာက ငါတို့တိုင်းပြည်ဟာ ပိုပြီး စည်းကမ်းရှိဖို့ လိုတယ်။ ငါတို့တိုင်းပြည်ဟာ လွတ်လပ်ရေးရအောင်လည်း စည်းကမ်းရှိရှိနဲ့ လုပ်ရမယ်။ အဲဒီလိုအားဖြင့် စည်းကမ်းသဘောတွေကို နားလည်ပြီး စည်းနဲ့ကမ်းနဲ့ အလုပ်လုပ်ကြမှ လွတ်လပ်ရေးဆိုတာ တကယ်ရမယ်။
– See more at: http://news-eleven.com/
kai says: ဗကပ အတွင်းရေးမှူး ဗိုလ်ကြင်မောင် ကွယ်လွန်
ရန်ပိုင်| January 20, 2015 | ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ် ပါတီ(ဗကပ) ၏ အတွင်းရေးမှူး ရဲဘော်ကြင်မောင် (ခ) ရဲဘော်ထွန်း အသက် ၉၂ နှစ်သည် လူကြီးရောဂါဖြင့် တရုတ်- မြန်မာ နယ်စပ်တွင် ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်သည်။
ပြီးခဲ့သည် ဇန်န၀ါရီလ ၃ ရက်နေ့ကတည်းက ဗိုလ်ကြင်မောင် ကွယ်လွန်သွားခြင်းဖြစ်သော်လည်း အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ယနေ့မှသာ ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီမှ ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်နိုင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပါတီ ပြောခွင့်ရ ရဲဘော် ဖိုးသံချောင်းက ဧရာဝတီသို့ပြောသည်။
kai says: ယူရေနီယမ် သတ္တု ရရှိကြောင်း ဦးတေဇ ထုတ်ဖော်ပြောဆို
သစ်နေမိုး| January 20, 2015 |
နျူကလီးယား ထုတ်လုပ်မှုတွင် အသုံးဝင်သော အဖိုးတန်ရှားပါး သတ္တု ယူရေနီယံဟု ယူဆရသည့် သတ္တုအနည်းငယ်ကို ယခုလ အတွင်း ဦးတေဇ က ရရှိခဲ့ပြီး အစိုးရသို့ လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အစိုးရ၀န်ကြီးဌာန ဘက်မှ ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးထားသည့်အဖြေအရဆိုပါက ယူရေနီယံသတ္တုဟုပင် ယူဆရကြောင်း၊ အစိုးရသို့ မအပ်ခင် အချိန်တွင်လည်း တရုတ်နိုင်ငံမှ သိနားလည်သူ ၂ဦးနှင့် ယူရေနီယံသတ္တု ဟုတ်မဟုတ် စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း ဦးတေဇက ပြောသည်။
၎င်းက“ကျနော် တရုတ်ပြည်က ၂ယောက်ကိုခေါ်ပြီး နိုင်ငံတော်မအပ်ခင်မှာ ပစ္စည်းမှန်မမှန် စစ်ပါတယ်။ စစ်တော့ သူတို့ သတ်မှတ် တာ အဆင့် ၁၃ ဆို တော်တော် ပြင်းနေပြီ ပြောပါတယ်။ နိုင်ငံတော်ကို အပ်လိုက်တာက ၃ ရက်၊ ၄ ရက် ရှိပါပြီ။ သိပ္ပံနည်းပညာ ဌာန ကို အပ်တာ။ မပို့ခင်တုန်းကလည်း ဓာတ်ခွဲခန်းပို့ပြီး စမ်းတယ်။ သူတို့အဖြေနဲ့ ကျနော်တို့အဖြေ အတူတူပဲ။ ဓာတ်ခွဲခန်း ရလဒ်ကြည့်တော့ ယူရေနီယမ်ပဲထင်တာ”ဟုလည်း ပြောသည်။
ဇန်န၀ါရီ ၁၉ ရက်က အင်းလျားလမ်းနှင့် တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်း ထောင့်ရှိ ၎င်း၏နေအိမ်တွင် မီဒီယာများနှင့် တွေ့ဆုံပြီး ဦးတေဇက အထက်ပါအတိုင်း ပြေားကြားခြင်း ဖြစ်သည်။
မန္တလေးတိုင်း မိုးကုတ်မြို့မှ ၃ နာရီခန့် သွားရသော အုန်ဒန်ရွာ အနီးတ၀ိုက်တွင် ဒေသခံတချို့က တွေ့ရှိခဲ့ပြီး ဦးတေဇ က ၎င်းတို့ထံမှ ရရှိခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
“သူတို့ လာရောင်းတာတောင် အမည်မသိ ဓာတ်သတ္တုတမျိုး ဆိုပြီး လာရောင်းတာ သူတို့တောင် ၂ကြိမ်ပဲရှိသေးတယ် တွေ့တာ”ဟု ၎င်းက ပြောပြသည်။
လက်ရှိ ရရှိထားသည့် ပမာဏမှာ ၃ ပိဿာ ခွဲခန့်ရှိပြီး နိုင်ငံတော်သို့ အကုန်နီးပါး အပ်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ ၎င်းထံတွင် နမူနာ အဖြစ် ချန်ထားသည်သာ ရှိတော့ကြောင်း သိရသည်။
kai says: အပေါ်က သတင်းဆောင်းပါးကို ..အောက်ကဆောင်းပါးနှင့်တွဲဖတ်စေလိုသည်။
ယူရေနီယံ – တကယ်လား အိပ်မက်လား
– See more at: http://news-eleven.com/%E1%80%B1%E1%80%86%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%B8%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8/%E1%80%9A%E1%80%B0%E1%80%B1%E1%80%9B%E1%80%94%E1%80%AE%E1%80%9A%E1%80%B6-%E1%80%90%E1%80%80%E1%80%9A%E1%80%B9%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%B8-%E1%80%A1%E1%80%AD%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%9C%E1%80%AC%E1%80%B8#sthash.L0WrdQDv.dpuf
မြစပဲရိုး says: ဒါလေးနဲ့လဲ တွဲဖတ်ကြည့်ပါ။ lol:-)))))
“ယူရေနီယံနဲ့ ပတ်သက်ပြီး နှစ်ပေါင်းများစွာ ဆရာအနီးကပ်လုပ်ခဲ့တာတောင် Radiation မသင့်ရင် ဦးတေဇ ခဏလေးနဲ့တော့ မသင့်နိုင်ပါဘူး။ ဒရာမာဇာတ်ကားရိုက်တာလား မသိဘူးပေါ့”
မြစပဲရိုး says: UN condemns Myanmar monk Wirathu’s ‘sexist’ comments
The BBC’s Jonah Fisher in Yangon said monks areapowerful political lobby in Myanmar. ဒီမယ် သူကြီးမင်း ရေ့ တွေ့ပြီဟုတ်။ ဘယ်သူ က ဘယ်သူ့ အတွက် လုပ်ပေးနေရတယ် ဆိုတာ။
ဒီအဝါရောင်ယူနီဖောင်းဝတ် က အစိမ်းရောင်တွေ အတွက် ကို ဆဲ ဆို ပေးနေရတော့တာ။
သက်ဆိုင်ရာ တာဝန် ရှိသူ သာသနာပိုင် လို့ တာဝန်ယူထားသူများ ဒီအတိုင်း ဘဲ ကြည့်နေမယ် ဆိုရင် တော့ ……
ကျွန်မ ရဲ့ ကိုးကွယ်ရာဘာသာ – မရှိ။
ကထူးဆန်း says: “ကျွန်မ ရဲ့ ကိုးကွယ်ရာဘာသာ – မရှိ။”
အရီးကို ဗုဒ္ဓဘာသာ ကိုးကွယ်တယ် ထင်တာ…
ဘုန်းကြီးကိုးကွယ် တာလား ……… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: အလိုလေး ….
ကထူးဆန်း ထူးထူးဆန်းဆန်း ကိုယ်ရောင်ပြလို့။
ဒီမယ် ကထူးဆန်း ရဲ့ “ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်” ဆိုတာ ဗုဒ္ဓဟောပြောသော စကား တရား ညွန်ပြချက် များ ကို လိုက်နာသူ လို့ အဓိပ္ပါယ် ကို မယူဘဲ
“ငါတို့ ဘာသာ” ဆိုပြီး အတ္တ တွေ ပြ နေမှတော့ အဲဒီ အတ္တအရောင် တွေ နဲ့ အမည် နာမ ကို သုံးစွဲခြင်း မှ ရှောင် တဲ့ သဘောပါ။
လောကကြီး ထဲ အရေးကြီး တာက နာမည် ကို တံဆိပ် တပ်ဖို့လား။ လက်တွေ့ မှာ ကျင့်သုံး ဖို့လား။
ဘာသာမဲ့ တွေ ရဲ့ ကိုယ်ကျိုးမပါ အများ အတွက် လုပ်နေတဲ့ အရာ များစွာ ကြားမှာ
ဘာသာအမည်တပ်ပြီး အတ္တ အစွယ် တွေ ထုတ်ပြ နေတာ မြင်ရတာ စိတ်ပျက်တယ်။
တကဲ့ ဗုဒ္ဓ တရား ကို လိုက်နာဖို့ ဘာမှ နာမ တပ်စရာမလိုပါ။
လက်တွေ့ အလုပ် ကလေး တွေ ဘဲ လိုတာပါ။
သရဏဂုံ မတည် ရင် ငရဲ ရောက်မတဲ့။
ထာဝရ ဘုရား ကို မယုံ ရင် ငရဲ ရောက်မတဲ့။
စမ်းကြည့်ချင်လို့ပါ။ ဘယ်လို သက်သေပြရပါ့။
လောလောဆယ် မတော့ အဲဒီ ဘာသာ တွေ ကဘဲ လက်တွေ့မှာ လောက ကို ဆီပူ တွေ နဲ့ တိုက် နေတာ။
လူ့ငရဲ ကတော့ လက်တွေ့ဘဲ။
မြစပဲရိုး says: နိုင်ငံခြားသား တစ်ချို့ ဒီ က ဘုန်းကြီး ကျောင်း မှာ တရားလာအားထုတ်နေတာ သူတို့ဟာသူတို ဗုဒ္ဓဘာသာ ဖြစ်လို့ ဆိုပြီး လာ တရား အားထုတ် နေတာ မဟုတ်ပါ။
စိတ်အေးချမ်းမှု ကိုလိုချင်လို့၊ အတ္တတွေ ခွါပြီး လောကဓံ ကို ခံနိုင်ဖို့ အတွက် လက်တွေ့ကျင့်ကြံ ကြိုးစား နေတာ။
သေရွာ အဝင်မှာ တနည်း လူ့လောက ထဲ က အထွက်မှာ …..
မင်း ဘာသာဝင် လဲ လို့ စစ် တဲ့ အင်မီဂရေးရှင်း ရှိ တယ် ထင်နေ ကြလို့ အတင်း ကိုယ်သန်ရာ ကောင်းနိုးရာရာ ဘာသာ အမည် တွေ တပ် နေကြတယ် ထင်တာဘဲ။ lol:-))))
တကယ်တော့ မသေခင် စိတ်ထားတတ် ဖို့ရော သေခါနီး စိတ်ထားတတ်ဖို့ ပါ အရေးကြီးတာပါ။
ဒါက ကိုယ့် အတွက်ရော၊ ကျန်ရစ်သူတွေ အပါအဝင် ကိုယ့် ပါတ်ဝန်းကျင် အတွက်ပါ ပိုကောင်းပါတယ်။
အဲဒီ အတွက် ကျင့်ကြံ နေရမှာ ထင်ရဲ့။
ဦးဦးပါလေရာ says: .ကထူးဆန်းရဲ့ အဓိပ္ပါယ် ရှိတဲ့အမေးနဲ့
.ကျုပ်လဲ နဲနဲတော့ ၀င်ပါဦးမယ်…
.အရင်ကတော့ ကျုပ်က ဘုန်းကြီးအဓိက ကိုးကွယ်တာပါ…
.ဘုန်းကြီးတွေနဲ့တင် လမ်းဆုံးနေသလို ဖြစ်နေတာ….
.အခုတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာ ကိုပဲ ပြောင်းကိုးကွယ်တော့တယ်…။
.အခုမှ သရဏဂုံ စစ်စစ် တည် တယ်လို့ ပြောရတော့မှာပဲ…..
kai says: Post by Mingalapar.
TED talk on “The Peculiarities of Burmese Names” by brilliant and beautiful Myanmar girl
TED talk program is the world famous program and the speakers are givenamaximum of 18 minutes to present their ideas in the most innovative and engaging ways they can.
Past speakers include Bill Clinton, Jane Goodall, Malcolm Gladwell, Al Gore, Gordon Brown, Richard Dawkins, Bill Gates, Bono, Mike Rowe, Google founders Larry Page and Sergey Brin, and many Nobel Prize winners.
kai says: ကျိန်စာသင့်နေတဲ့ တိုင်းပြည်လို့ ညီမင်းညို ဘာ့ကြောင့် ရည်ညွှန်းသလဲ
Posted by: Video-editer on January 27, 2015 at 21:44 PM0Comments
ပုစွန်တောင် ၇ရပ်ကွက်က စာပေချစ်မြတ်နိုးသူတွေ ဦးစီးပြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း နှစ် ၁ဝဝပြည့်မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ် စာပေဟောပြောပွဲကို ဇန်နဝါရီ ၂၆ရက်နေ့က ကျင်းပခဲ့ပြီး မင်းကိုနိုင်၊ စမ်းစမ်းနွဲ့(သာယာဝတီ)နဲ့ ညီမင်းညိုတို့ ဦးဆောင်ဟောပြောခဲ့ပါတယ်။ ကျိန်စာသင့်တိုင်းပြည်လို့ စာရေးဆရာ ညီမင်းညို ဘာ့ကြောင့်ရည်ညွှန်းခဲ့တာလဲ။
ပုစွန်တောင် စာပေဟောပြောပွဲက နှစ်စဉ်ကျင်းပတာဖြစ်ပြီး ဒီနှစ်ကတော့ ဗိုလ်ချုပ် နှစ် ၁ဝဝပြည့်မွေးနေ့နဲ့ တိုက်ဆိုင်နေတာကြောင့် မြန်မာပြည်သူအားလုံး ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ကျေးဇူးနဲ့မကင်းလို့ အလုပ်လုပ်ပြီး တိုင်းပြည်ကျေးဇူးကို ဆပ်ရမယ်လို့ ပွဲစီစဉ်သူ ဦးတင့်နိုင်က ပြောပါတယ်။
၈၈မျိုးဆက်က ကိုမင်းကိုနိုင်က တိုင်းပြည်တစ်ခုရဲ့ မဏ္ဍိုင်၃ရပ်ကို နိုင်ငံတကာစံနှုန်းတွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ပြီး လွဲမှားနေပုံကို ထောက်ပြပြီး လွှတ်တော်ရဲ့အောင်မြင်မှုကို တိုင်းတာဖို့ ပြည်သူကိုအကာအကွယ်ပေးတဲ့ ဥပဒေပြဌာန်းမှုရှိဖို့ ဖိနှိပ်တဲ့ ဥပဒေတွေကို ပယ်ဖျက်ဖို့ဆိုတဲ့ လုပ်ရပ်တွေနဲ့ တိုင်းတာရမှာလို့ ဆိုပါတယ်။ ၂ဝ၁၅ဟာ အကွေ့အကောက်များနိုင်ပြီး ပြည်သူတွေ မအကြဖို့ အဓိကအရေးကြီးတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ညီညွတ်မှုနဲ့ ဉာဏ်ပညာကိုယှဉ်တွဲပြီးသုံးဖို့ကိုလည်း သူက တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။
စာရေးဆရာမ စမ်းစမ်းနွဲ့(သာယာဝတီ)ကလည်း မေတ္တာနိုင်ငံတော်ခေါင်းစဉ်နဲ့ ဟောပြောခဲ့ပြီး ဘာသာတစ်ခုနဲ့ တစ်ခုအကြား၊ လူမျိုးတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးအကြား အပြန်အလှန်လေးစားပြီး တန်ဖိုးထားဖို့၊ မေတ္တာတရားရှိကြဖို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ စာရေးဆရာ ညီမင်းညိုကတော့ ကျိန်စာသင့်တိုင်းပြည်ခေါင်းစဉ်နဲ့ ဟောပြောရာမှာတော့ မြန်မာပြည်ဟာ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ပညာရေးကျိန်စာတွေသင့်နေပြီး အခုတော့ ဘာသာရေးကျိန်စာပါ သင့်နေပြီလားလို့ မေးခွန်းထုတ်ခဲ့ပါတယ်။
တောင်းဆိုရမှာက တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဖြစ်ပြီး တကယ်တောင်းနေတာက လူမျိုးရေးပဋိပက္ခတွေဖြစ်နိုင်တဲ့ ဥပဒေတွေ တောင်းဆိုနေကြတာမို့ တိုင်းပြည်ဂုဏ်သိက္ခာကျအောင် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိလုပ်နေတယ်လို့ သူကဆိုပါတယ်။
kai says: https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-9/1555462_1042359145779619_2888745647919258889_n.jpg?oh=84aadd665a77912e07415a9c2f20fa6f&oe=556E08BC&__gda__=1431501828_d6d3392aa201074f660f7076427d87f7
kai says: Microsoft’s Bill Gates insists AI isathreat
29 January 2015 Last updated at 13:05 ET
The Microsoft founder said he didn’t understand people who were not troubled by the possibility that AI could grow too strong for people to control.
2 December 2014 Last updated at 08:02 ET
Rory Cellan-Jones By Rory Cellan-Jones Technology correspondent
kai says: အရင်က.. စတီဗင်ဟောကင်းပြောထားတဲ့အတိုင်း.. ဘီလ်ဂိတ်ကပြောပြန်ပြီဆိုတော့… သေချာလာပုံပါပဲ..
ဆိုတော့… AI တွေလက်ထက်မှာ…
နိဗ္ဗာန်တွေ…။ ပါဏာတိပါတတွေ.. ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ.. သိချင်..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: လောကကြီး ထဲ မြင်နေရတဲ့ “ကံ ကံ၏ အကျိုး အကြောင်း” တွေ ကို AI က တကယ်ဘဲ ဖမ်းဆုပ် ပြနိုင်မှာတဲ့လား။
ကြိုးစားတိုင်း ဖြစ် နေတော့မဲ့ အချိန် ဆိုတာ ကို AI က တကယ်ဘဲ ပံ့ပိုး ပေးနိုင်မယ်လား။
လူတစ်ယောက် ချင်း အတွက် အောင်မြင် အောင် ပံ့ပိုး ပေးနိုင်တယ် ထားဦး။
သူ နဲ့ ဆက်နွယ် လာမဲ့ မသိနိုင် တဲ့ ဆက်စပ်မှု တွေ ကို ဘယ်လို မှန်းနိုင် မယ်ထင်လဲ။
ထပ်ငြင်းဖို့ ထပ်ပြီး google research လုပ်လိုက်ဦးမည်။ lol:-)))
kai says: ကံ..ကံအကျိုး..အကြောင်းကို.. အရီးလတ်ဘယ်လိုမြင်သလည်းတော့မသိ…
ကျုပ်ကတော့.. Butterfly Effect လိုမြင်သမို့… အေအိုင်တွေ… သေသေချာချာဖမ်းဆုပ်ပြရင်း.. လူတွေကိုကျော်စားသွားမယ်… ထင်..။
The mathematics of chaos has been popularized through the notion of the butterfly effect: the possibility thatalarge storm in New England may be caused byabutterfly wing flap in China.
မြစပဲရိုး says: သူကြီးမင်း အခု သတင်း ကို အသေအချာ သိမ်းထား။ သူမှန်းတာ လွဲ ရင် ပြန်ပြောကြရအောင်။
(Year 2100) လောက်ထိ နေနိုင်ခဲ့ ကြရင်ပေါ့) ဒီမှာ သူ မပြောခဲ့ ပါလို့ ငြင်းခဲ့တဲ့ သူမှန်းပြော ခဲ့ တဲ့ စကား။
Quote: No one will need more than 637 kb of memory forapersonal computer. 640K ought to be enough for anybody.”
အခုချိန် မှာ အူလှိမ့်ရီ ဖို့ မကောင်းပေဘူးလား။
Bill Gates has faithfully denied he never said this, but the quote has taken onalife of its own and become synonymous with the Microsoft founder.
Supposedly, he was quoted atacomputer trade show in support of the IBM PC’s 640KB RAM limit, which he’d been heavily promoting that year.
Chances are he might have been misquoted, having originally said, “640K ought to be enough for anybody” at the time.
A feature on the Huntsville Times website notes Gates response to the remark: “I’ve said some stupid things and some wrong things, but not that.
No one involved in computers would ever say thatacertain amount of memory is enough for all time.”
The majority agress he said something along the lines of 640KB of RAM sufficing for PC users. Take the L and move forward.
တကယ်တော့ လောကကြီး ထဲမယ် ကွန်ပျုတာ industry တင်မက တစ်ခြား industry တွေလဲ နောင်အနာဂါတ် တစ်ခု မှာ ဘာဖြစ်မယ် ဆိုတာ ဘယ်သူမှ အသေအချာ မပြောနိုင်ပါလေ။
အဲဒီကထဲ ကို က ဆက်စပ်လို့ မရ တဲ့ မမြင်နိုင် တဲ့ Factors တွေဟာ ကျွန်မ တို့ ကို ထိန်းချုပ် နေပြီးသား။
ဘာလဲလို့ တော့ ဘယ်သူမှ အခုထိ မသိကြသေး။
အဲဒီ အေအိုင် က ကျွန်မ လို နေရာတကာ လိုက်ပြီး ထင်ရာ ပေါက်ပန်း အငြင်းထူ နိုင်မယ်လား။
ကျွန်မတို့ ရွာထဲ မှာ တင် တဲ့ ခေါင်းစဉ် တစ်ခြား အောက်မှာ ရောက်သွားတာက တစ်ခြား ပြောသလို လိုက် ပြောနိုင်မယ်လား။
ရချင်လဲ ရမပေါ့လေ။ မသိ။
လောလောဆယ် မတော့ ပြောချင်တာ ကို ရွာထဲ တန်းချ ရေးပြနိုင် တဲ့ အစွမ်း ရှိတဲ့ ပရိုဂရမ် တစ်ခု ထွင်နိုင်ကြရင် ကောင်းမယ် တွေးနေတာ ကော။ Was this answer helpful?LikeDislike 14410
kai says: U.S. to Develop DNA Study of One Million People
kai says: MRTV
ဘော်စတွန်ရှိလမ်းမကြီးနှင့် ကပ်လျှက်ရှိသည့်အိမ်များ ရှင်းလင်းရေးလုပ်ငန်းများ မလုပ်ဆောင်သည့် အတွက် ၎င်းအိမ်များအား ဒဏ်ကြေးကောက်ခံ
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု မန်ဆာချူးဆက်တွင် ယခုသီတင်းပတ်အတွင်း နှင်းမုန်တိုင်း ပြင်းထန်စွာတိုက်ခတ်ခဲ့ကာ နှင်းထုသည် (၂)ပေကျော်ထိ မြင့်တက်ခဲ့ပြီးနောက် ဘော်စတွန်ရှိ လမ်းမကြီးနှင့် ကပ်လျက်ရှိသည့်အိမ်များသည် ရှင်းလင်းရေးလုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်ခြင်းမရှိသည့်အတွက် ၄င်းအိမ်များကို အမေရိကန်ဒေါ်လာ(၅၀)စီ ဒဏ်ကြေးကောက်ခံရန် အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဂျွန်ကယ်ရီမှ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြောင်း သိရပါသည်။ နှင်းများကျဆင်းမှုကို လမ်းသွားလမ်းလာများ သတိပြုမိစေရန် လူသွားစင်္ကြန်တစ်လျှောက် အ၀ါရောင်ကြိုးများ တားထားပါသည်။ ကယ်ရီဟာ ဘုရင်အဘဒူလာ၏ ဈာပနသို့ တက်ရောက်ရန်နှင့် ဆော်ဒီဘုရင်သစ်နှင့် တွေ့ဆုံရန် သမ္မတအိုဘားမားနှင့်အတူ ဆော်ဒီအာရေးဘီးယားသို့ ရောက်ရှိနေတာ ဖြစ်ပါသည်။ ယခုအခါမှာတော့ နှင်းရှင်းလင်းရေး ကုမ္ပဏီ၏ အကူအညီဖြင့် နှင်းများအားလုံးကို ရှင်းလင်းပြီးဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
John Kerry Fined $50 for Failing to Shovel Snow Outside Boston Home
AP | 01.29.15 | 8:37 PM
The globe-spanning diplomat can add one more: snow shoveling scofflaw.
Afterablizzard dumped two feet of snow on his city this week, Boston Mayor Martin Walsh vowed to crack down on anyone who left the sidewalks in front of their homes and businesses buried in snow.
kai says: အမေရိကားကို.. အမေရိကန်လို့ပြောပြောနေတတ်တဲ့.. အမ်အာတီဗီရဲ့ဘာသာပြန်တွေလုပ်ချလိုက်ပုံများကတော့… ဂျွန်ကယ်ရီကဒဏ်ငွေဆောင်လိုက်ရတာကို.. သူကပဲဒဏ်ငွေပေးစေဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပုံဖြစ်သွားပါကြောင်း..
ကြုံလို့ပြောရရင်..အမေရိကားက နှင်းကျတဲ့ပြည်နယ်တွေမှာ.. အမေရိကန်တွေနေတဲ့အိမ်ရှေ့ အများသွားလူသွားလမ်းပေါ်က ဆီးနှင်းခဲတွေကို အိမ်ရှင်ကတာဝန်ယူရှင်းရတယ်ဆိုတာ.. ဥပဒေအရဖြစ်ပါကြောင်းရယ်လို့..။
အင်း..အနိစ္စ… အမေရိက..အမေရိကန်..။ =
မြစပဲရိုး says: အဲ သတင်း က အမေရိကန် စကား နဲ့ မှ ရေးမထားတာကို လေ။
မှားပြန်မိမှာပေါ့။ lol:-)))) jk Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.